भोट चाहिन्‍छ, जहाँजहाँ बोलाउँछन् जानैपर्‍यो : दाहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भोट चाहिन्‍छ, जहाँजहाँ बोलाउँछन् जानैपर्‍यो : दाहाल
माघ २५, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कहिलेकाहीँ सप्ताह, यज्ञ र पूजालगायतका धार्मिक समारोहमा सहभागी हुँदैमा अन्धविश्‍वासी भयो भन्‍न नमिल्ने बताएका छन् ।
कान्तिपुर कन्क्लेभको दोस्रो संस्करणको अन्तिम सत्रमा कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मासँग परिसंवाद गर्दै कहिलेकाहीँ भोटका लागि सबै जनताको बीचमा पुग्‍नुपर्नेअध्यक्ष दाहालले बताए । उनले भने, 'भोट चाहिन्छ जहाँ पनि जानै पर्‍यो । कहिलेकाहीँ यज्ञ, पूजा आदिमा जानै पर्ने बाध्यता छ । जनता जहाँ छन् त्यहाँजानुपर्छ भनेर मार्क्सले पनि भनेका थिए । जनतासँग जोडिने कुरालाई नकारात्मक रुपमाहेर्न मिल्दैन ।'
उनले पछिल्लो समय धेरै समय जनताकै हितका बारेमा सोच्‍ने गरेको भए पनि फूर्सदकोसमयमा पुस्तक पढ्ने र सद्‍गुरुका प्रवचन हेर्ने गरेको बताए । सद्‍गुरु सबैभन्दाभौतिकवादी भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले उनको प्रवचन सुन्दैमा आफूलाई अन्धविश्‍वासीभयो भनेर नबुझ्‍न सबैलाई आग्रह गरे ।
प्रकाशित : माघ २५, २०७६ १९:१३
फिल्म समीक्षा : सेल्फी किंङको सतही संवेदना
माघ २५, २०७६
काठमाडौँ — फिल्म होस् वा टेलिभिजन, जताततै हाँस्यकलाकारको जगजगी छ । चकलेटी र एक्सन हिरोहरुसमेत ओझेलमा परेका छन् । तर, हरबखत हँसाउने कलाकारको अन्तरवेदना ख्यालै गरिन्नँ ।
टेलर सार्वजनिक भएसँगै ‘सेल्फी किङ’ले कलाकारको यही पाटोलाई मानवीय कोणबाट पोख्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
यो फिल्मको केन्द्रमा अनेक पीडामा रुमल्लिरहेका हाँस्यकलाकार छन् । तर, लेखक/निर्देशक विशाल सापकोटाले मूल पात्रको भोगाईलाई संवेदनशील र सापेक्ष शैलीमा पस्कन नसक्दा ‘हाँसोभित्रको रोदन’अनुभूत हुन्न । कतै संवेदनाको प्रस्तुति हल्का छ, कतै अतिरञ्जित परिस्थिति निर्माण गरिएको छ ।
ट्रेलरबाट जे कथा अनुमान गर्न सकिन्छ, फिल्ममा त्योभन्दा विशेष केही छैन । हास्यकलाकारितामा 'सेल्फी किङ' उर्फ गोपाल (विपिन कार्की) ले खुब लोकप्रियता कमाएका छन् । सोलुको सल्लेरीमा स्टेज कार्यक्रम जानुपर्ने अघिल्लो दिन उनका बुबालाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्छ । पैसाको आवश्यकता र कलाप्रतिको इमानदारिताले बिरामी बाबुलाई छोडेर सल्लेरी जान तयार हुन्छन् । आयोजकको हवाई यात्राको व्यवस्था गरिदिँदैन, बाटोमा अनेक सास्ती झेल्नुपर्छ । जब उनको कमेडी हेर्न सयौं भेला भएका हुन्छन्, त्यहीबेला गोपालमाथि बज्रपात आइलाग्छ । दर्शक हँसाएर कलाकारका रुपमा आफ्नो दायीत्व पूरा गर्न गोपाल सक्षम होलान् ? उनले पाइला–पाइलामा बेहोर्ने संकटको फेहरिस्त हो फिल्म ।
कथाको विकासक्रममात्र होइन, क्लाइमेक्समा पनि खास नवीनता भेटिन्न । नेपाली फिल्मको आमसमस्या हो, पात्रलाई दर्शकले आत्मसाथ गर्न नसक्नु । सोही कारण न पात्रको खुशीमा दर्शक रमाउन सक्छन्, न त दुखले छुन्छ । चरित्र स्थापित विश्वसनीय नहुँदाको परिणाम हो यो । ‘सेल्फी किङ’यसबाट रत्तिभर अलग छैन । गोपाललाई असाध्यै चर्चित कलाकारझैं प्रस्तुत गरिएको छ, देख्ने जति हरेकले उनलाई चिन्छन् तर उनी कुन माध्यमबाट कसरी यतिविघ्न लोकप्रिय भए भन्नेचाहिँ पूरै वेवास्ता गरिएको छ ।
आमाबुबाले टेलिभिजनमा हेरेको केही फुटेजबाहेक गोपालको हाँस्यकारिता कतै देख्न पाइन्न । आजकल हल्काफुल्का हिट हुनासाथ मिडियाले घेरिहाल्छन् तर उनीचाहिँ एउटा साप्ताहिक पत्रिकाको पत्रकारले बकम्फुसे प्रश्न सोध्दा पनि दंग पर्छन् । पत्रकारको बोलीचाली उस्तै अस्वभाविक लाग्छ ।
गोपालका बाबुआमाको कुराकानीबाट सुरु हुने फिल्मको दृश्य नै बासी र पट्यारलाग्दो छ । आफन्त विरामी बनाएर पात्रमा समस्या सिर्जना गरिदिने सबभन्दा सजिलो उपाय हो । तर, त्यसलाई पनि गहकिलो ढंगबाट बुनेर मूल पात्रप्रति सहानुभूति पैदा गर्न चुकेका छन्, निर्देशक विशाल । उस्तै भावका दृश्य पटक–पटक आउनु र त्यसलाई लम्ब्याउनु अर्को कमजोरी हो । सुमोको टिकट लिँदा, सुमोका अन्य यात्रुको व्यवहार, खाजा खाएको होटल साहुको रवैया, आयोजक र अर्का दुई कलाकारसँग रक्सी पिएकोजस्ता कृत्रिम दृश्यहरु थोपरिएको छ । कतै पात्र बिनाप्रयोजन बोलेको–बोल्यै गर्छन्, त्यतिबेला फिल्म रेडियो नाटक जस्तो लाग्छ । कतै दृश्य अनाश्वयक रुपमा तन्काइन्छ, फिल्म टेलिसिरियल जस्तो लाग्छ । पात्रको उद्देश्य र केन्द्रिय द्वन्द्वप्रति निर्देशक आफैं द्विविधाग्रस्त छन् ।
गोपाललाई एक्लै पर्दामा देख्दा दर्शकले धेरथोर उनको राप महसुस गर्छन् तर अर्को पात्र प्रवेशले त्यो ‘मुड’भंग भइहाल्छ । आमा, बुबा, पत्नी, दिदी, बाटोमा भेटिएका यात्रुहरु, होटल साहु, सबै–सबै ‘लाउड’छन् । निर्देशकले सहायक पात्रमार्फत सिर्जन खोजेको संवेदना अप्राकृतिक लाग्छ । एउटा कलाकारप्रति आयोजकदेखि हरेक व्यक्ति यत्तिकै असंवेदनशील होलान् ? यद्यपि गोपालभित्रको स्वाभिमान, आक्रोश र कुन्ठालाई केही दृश्यमा प्रभावकारी ढंगले व्यक्त गरिएको छ ।
आफूभन्दा कनिष्ठ कलाकारलाई आयोजकले ज्यादा सुविधा दिएपछि गोपाल खुब भड्कन्छ तर भोलिपल्ट बिहान आफैं क्षमा माग्छ । मान्छेले चिन्छन् भनेर मास्क लगाएर हिँड्छ, जब मास्क खोल्नुपर्छ, तब लज्जाबोध गर्छ । गरिबीका कारण आफ्नै सहयोगीबाट मजाक झेल्नुपर्छ । सेल्फी किङका रुपमा चर्चा कमाएका छन् तर कहिल्यै सेल्फी खिच्दा खुशी हुँदैनन् । सिधैं भनिदिन्छन्, ‘स्टारडम मूतको न्यानो जस्तै हो ।’त्यसो हुनाले हरेक कलाकारले कहिं न कहिं गोपालमा आफूलाई पाउन सक्छन् ।
मध्यान्तरको गोपालको सपना र अन्तिमतिर उनलाई स्टेजमा देखेर दर्शक हाँस्ने दृश्य प्रतिकात्मक छ । ‘जीन्दगीको के छ र भर...’ गीत पात्रको भाव अनुकुल छ । तर, सल्लेरीबाट फर्कदा पनि अपत्यारिलो र अतिरञ्जित संकटले निरन्तरता पाइरहन्छ । लिफ्ट लिएको गाडी, मोटरसाइकल जहाँ पनि गोपाललाई समस्यामात्र आइलाग्छ । पात्रलाई एकपछि अर्को तनावमा फँसाएपछि दर्शकको आँखा रसाउँछ भन्ने धङधङी देखिन्छ, निर्देशकमा । जबकि बोलेर होइन, मर्मस्पर्शी शैलीमा दृश्यमै तनाव व्यक्त भयो भने मात्र दर्शकको मन भारी हुन्छ ।
रुन्चे ‘मनोलग’बाट गोपालप्रति सहानुभूति बटुल्न खोजेबाटै निर्देशकको अपरिपक्वता झल्कन्छ । अमेरिकामा फिल्मको औपचारिक अध्ययन गरेर आएका भनिएका विशालसँग त्यो सिर्जनशीलता देखिएन । अनि, छुटाउन नहुने कुराचाहिं ‘सेल्फी किङ’हाँस्यकलाकारको फिल्म हो तर यसले कलाकार हुनु पश्चतापमा पिल्सनु हो, परिवार र समाजबाट तीरस्कार सहनु हो, गरिबीमा फस्नु हो सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
यो समयका प्रभावशाली अभिनेता हुन्, विपिन । वास्तविक जीवनमा पनि उनी गोपालझैं ‘स्टारडम’मा खास रमाउँदैनन्, अन्तरमुखी छन् । त्यसैले पात्रलाई जीवन्त बनाउन उनको सक्दो प्रयत्न देखिन्छ । तर, पटकथाभित्र पात्रको संसार साँघुरो र अविश्वसनीय भएकाले पर्दामा विपिन शानदार लाग्दैनन् । उनी संयुक्तभन्दा एकल दृश्यमा जमेका छन् । उनले कथा, पात्रसँगै निर्देशक चयनमा सजकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । किचकिचे पत्नी लक्ष्मी बर्देवा अनि धुर्त आयोजक जीवन भट्टराईले प्रसंशनीय काम गरेका छन् । भुवन चन्द र अभय बरालको अभिनय अलि सहज देखिदैन । सिनेमाटोग्राफी र साउन्डमा तुलनात्मक हिसाबमा काम उम्दा लाग्छ । पहाडी भेगका केही मौलिक दृश्यले आँखा तान्छ ।
हाँस्यकलाकारको वियोगको कथा रोज्नु सकारात्मक हो, मसलेदार सुत्रलाई पनि अंगीकार गरेको छैन तर ‘क्लिसे’प्लट, निरस र सहती कथावाचनले ‘सेल्फी किङ’कमजोर कोटीमा दर्ज भएको छ । गोपालप्रति फिल्मका अन्य पात्रले झैं निर्देशक स्वंयले ‘मजाक’गरेको र संवेदनशीलता नदेखाएको प्रतीत हुन्छ । त्यसैले डेब्यु फिल्ममा विशाललाई धाप मार्न सकिन्न । आगामी दिनमा सिनेमाका आधारभूत गुणलाई पछ्याउनेछन् भनेर अपेक्षाचाहिं राखौं ।
फिल्म : सेल्फी किङ
लेखक/निर्देशक : विशाल सापकोटा
कलाकारहरु : विपिन कार्की, लक्ष्मी बर्देवा, अभय बराल, भुवन चन्द आदि ।
रेटिङ : १.५
प्रकाशित : माघ २५, २०७६ १९:०४
Panasonic Front Load Washing Machine
Price drop from Sep 26
Free Shipping | Shop Now
Yasuda Water Purifier + Dispenser
Win this at just Re. 1 | Play 1 rupee game
महिला हिंसाको फेरिँदो स्वरूप
आश्विन १०, २०७८
सन् १९७७ मा प्रकाशित एउटा लेखमा अमेरिकी समाजशास्त्री इर्भिङ गफम्यानले भनेका छन्— मानव समाजको ‘अफिम’ दार्शनिक कार्ल मार्क्सले भनेजस्तो धर्म नभएर जेन्डर अर्थात् लिंग हो ।...
खेतीपातीले बिराएको बाटो
कृष्णप्रसाद पौडेल आश्विन १०, २०७८
सामान्य कामकाजी मानिस अक्सिजन, पानी र खाना नभए कति दिन बाँच्ला ? यसको सहज उत्तर हो— क्रमशः तीन मिनेट, तीन दिन र तीन हप्ता । हाम्रो जीवन...
युरोप बन्ला संयुक्त राज्य ?
सन् १९४४ मा युरोपका तीन राज्य, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड र लक्जेम्बर्ग मिलेर बेनेलक्स नामक आर्थिक–राजनीतिक संघ बनाएका थिए । बेनेलक्ससँगै सन् १९५१ मा तत्कालीन पश्चिम जर्मनी, फ्रान्स...
नेताहरूको छुद्र वाणी : अब यहीँ रोकियोस्
सम्पादकीय आश्विन १०, २०७८
अचेल नेपाली नेताहरू, तिनमा पनि शीर्ष भनिएका अगुवा नेताहरूको भाषण सुन्यो भने लाग्छ— उनीहरू कुनै तर्क, विवेक, दृष्टिकोण र योजना नभएका मामुली झगडियासिवाय केही होइनन् ।
गणेशमान सिंह र आजको कांग्रेस
कृष्ण खनाल आश्विन ९, २०७८
यतिखेर नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको चरणमा छ । गणेशमान सिंहको निधन भएको २४ वर्ष भइसकेको छ । निधन हुनुभन्दा तीन वर्षअघि नै उनले कांग्रेस छाडेको घोषणा गरेका...
काँकरभिट्टामा के छैन, सब थोक छ !
उज्ज्वल प्रसाई आश्विन ८, २०७८
पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रको पहलमा बर्मा र असमबाट फर्केका ‘प्रवासी नेपाली’ लाई जग्गा दिएर बसोबास गराएको भेगलाई बर्मेली टोल र आसामे बस्ती भनिन्छ । नेपालका अन्य सहरमा...
लोकप्रियताका लागि रिट, सेवाग्राही न्याय–वञ्चित
वर्षा झा आश्विन ८, २०७८
सर्वोच्च अदालतमा दिनानुदिन मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सर्वोच्चसहित मुलुकभरिका अदालतमा १ लाख २२ हजार ४ सय १९ मुद्दाको फैसला हुन बाँकी...
ओकस : फेरिँदो भूराजनीतिको अमेरिकी अस्त्र
गोपाल खनाल आश्विन ८, २०७८
बेलायती साम्राज्यका प्रतिरक्षाकर्ता भूराजनीतिज्ञ सर हाल्फोर्ड म्याकिन्डरले सन् १९०४ मा आफ्नो प्रवचन ‘द जोग्राफिकल पिभोट अफ हिस्ट्री’ मार्फत एउटा भूराजनीतिक सिद्धान्त प्रस्ताव गरे, जसलाई ‘हार्टल्यान्ड’...
सहरमा थापिएका धराप
सम्पादकीय आश्विन ८, २०७८
काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरी बस्ती कपनको मिलनचोकमा बुधबार खुला राखिएको ढलमा एक बालक बगेर बेपत्ता हुनु कुनै सामान्य घटना मात्र होइन, यसले हाम्रो सरकारी प्रणालीको बेथिति,...
अंगेला मर्केलका सोह्र वर्ष
जीवा लामिछाने आश्विन ७, २०७८
कहिले डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सामान किन्दै गरेको त कहिले सेमिनारको सिटमा बसेपछि मास्क बिर्सिएको चाल पाएपछि पोडियमतिर दगुर्दै गरेको जस्ता सामान्य घटनाका तस्बिर–भिडियो भाइरल भई सारा...